5 yemahara uye 'yakachipa mutengo' zvinhu zvekuona muCórdoba | Kufamba Nhau
5 yemahara uye 'yakachipa mutengo' zvinhu zvekuona muCórdoba
Carmen Guillen | | Spain maguta, Córdoba
Kana svondo rapfuura takakuunzira chinyorwa chakakumikidzwa kune iyo 7 emahara zvinhu zvekuona muSevilleNhasi tinokuunzira chimwe chinhu chakafanana kana chisina kufanana muguta riri padyo neguta reAndalusian: Córdoba. Pano iwe unogona kuwana 5 yemahara uye 'yakachipa mutengo' zvinhu zvekuona muCórdoba. Zvese vakasununguka vari 3 uye vaviri, nemutengo wakaderera kwazvo ('mutengo wakaderera'). Ivo vakakoshesa kushanya kwako, kwete chete kune runako lwenzvimbo asiwo nhoroondo iyo yakavapoterera. Zvirokwazvo iwe unofungidzira kuti ndeapi masayiti mashanu andinoreva. Kana zvisiri, ramba uchiverenga.
1 Cordoba yevadikani vangu
1.2 Sinagoge reCórdoba
1.3 Alcazar weMadzimambo
1.4 Múdejar Chapel yeSan Bartolomé
1.5 Yayo Cathedral: Iyo Mosque
Cordoba yevadikani vangu
Córdoba, yakanaka uye sultana, ine zvakawanda zvekuratidza mushanyi uye kwete chete ini ndinozvitaura, asi makore enhoroondo. Tevere, isu tichaenda kuratidza kuti ndedzipi nzvimbo nhatu mune ino yakanaka guta reAndalusian iwe raunogona kuona mahara uye ndeapi 3 aunogona kushanyira uchibhadhara zvishoma, izvo zvatinoona nhasi 'zvakaderera mutengo'.
MuchiArabic "Guta Rinopenya", ichi anenge 8 km kunze kweCórdoba. Yakarairwa kuti ivakwe naAbd-al Rahman III, sekureva kwevanyori vezvakaitika kare sechivakwa chinomiririra simba raCaliph panguva iyoyo. Vamwe, zvisinei, vanoti yakavakwa mukuremekedza Azahara, mukadzi anodiwa waCaliph.
Kana iwe uri mugari we Nharaunda yeEuropean Unogona kushanyira Medina Azahara mahara pasi peinotevera purogiramu:
Chipiri kusvika Mugovera: 10:00 a.m. kusvika 18:30 pm
Svondo 10: 00 a.m. kusvika 14: 00 p.m.
Tembere iyi yaive yakavakwa muna 1315 nemuvaki Isaq Moheb. Ndiyo chete sinagogi raivepo muAndalusia. Uye yako yekupinda yakasununguka mahara vagari veEuropean Union, sekuMedinza Azahara. Maawa ekushanya anotevera:
Chipiri kusvika Svondo: Kubva 09:30 am kusvika 14:00 pm uye kubva 15:30 pm kusvika 17:30 pm
Alcázar de los Reyes iri mu Makuva evakafirwa. Iyo imba yamambo inounganidza mhando dzese dzekushongedza nekuda kwekushanduka kukuru kwekuvakwa munzvimbo iyoyo. Arabesque inosanganiswa neVisigothic neRoma zvisaririra iyo yakapfuura nomuguta. Iyo inhare inoshamisa, ine shongwe ina dzechimiro chakasimba uye yakashongedzwa zvakanaka kwazvo nevazhe dzakachengetedzwa zvakanaka dzinoishongedza.
Su Maawa ekushanya es:
Muvhuro wakavharwa kushanya.
Chipiri kusvika Mugovera, kubva 08:30 a.m. kusvika 19:30 pm
Svondo, kubva 09:30 kusvika 14:30.
Kupinda ndiko yemahara yevana kusvika kumakore gumi nemana uye vakuru vanobhadhara chete 4 euros patikiti.
Múdejar Chapel yeSan Bartolomé
Parizvino, iyo Mudejar Chapel yeSan Bartolomé iri mu Ruzivo rweFilosofi uye Tsamba dzeYunivhesiti yeCórdoba. Yakaziviswa Asset yeCultural Interest munaJune 3, 1931 uye yakanga isiri kusvika munaKurume 20, 2010 payakavhura madhoo ayo kuruzhinji, mushure mekudzoreredzwa kwakaitwa pakati pa2006 na2008.
Muvhuro kubva 15:30 pm kusvika 18:30 pm
Chipiri kusvika Mugovera kubva 10:30 am kusvika 13:30 pm uye kubva 15:30 pm kusvika 18:30 pm
Svondo kubva 10:30 am kusvika 13:30 pm
Kupinda kwako kwakasununguka zvachose.
Yayo Cathedral: Iyo Mosque
Uye seyakanyanya yekupedzisira kosi, inonyanya kuzivikanwa nzvimbo muCórdoba.
Ichi chivakwa chiri inonyanya kukosha kumadokero kwenyika yeIslam, inzvimbo inoyevedza uye inoyevedza. Wese munhu anopinda muMosque anogara akashamiswa nekushongedzwa kwaro, zvese zviri zviviri muRenaissance, Gothic uye Baroque zvitaera zvechivakwa chechiKristu. Kwemakore mazhinji, La Mezquita yakabata mapoka ainamata huMwari uye yakatogoveranwa nevaMuslim nevaKristu munguva yepamberi peAbderraman I nguva (chimwe chinhu chisingafungidzike nhasi, kana kwete?).
Muchivakwa chako unogona kunyatsoona nzvimbo mbiri dzakasiyana:
Chivanze chakavezwa, pakamira minaret, mupiro waAbd al-Rahman III.
Kwemakore, mamwe matunhu mashanu akavakwa anoenderana nezvimwe zvinowedzerwa.
MuMosque, chero munhu anoda kupinda anofanirwa kubhadhara masere eurosi semari yekupinda (asi yakakosha kwazvo). Yake purogiramu inotevera:
Kubva Muvhuro kusvika Mugovera, kushanya kwevashanyi kubva 10:00 a.m. kusvika 19:30 pm (€ 8).
Kubva 8:30 kusvika 10:00 maawa unogona kugadzira a kunamatira chinyararire kushanya, izvo zvichave vakasununguka.
Uye paSvondo yakavharwa kushanya nekuti minamato inoitwa.
Ehezve, ivowo vanofanirwa-kuona kwemwedzi waMay, ane mukurumbira Patios de Córdoba uye yakanaka, kwatinako kuzotsaurira chinyorwa chakakosha sezvo zuva rinoswedera (kunyatsoteerera!). Ani naani anoshanyira Córdoba, haangowiri murudo neguta asiwo nevanhu varo uye nechiedza charo. Iri harisi rakakura guta asi riine yakakura Tsika uye Nhoroondo Nhoroondo yekuudza.
Kana iwe usingazive zvekushanyira mumwaka uno wegore, Córdoba inofanira kunge iri pakati pesarudzo dzako dzekutanga gumi. Iwe hauzodemba!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Spain maguta » Córdoba » 5 yemahara uye 'yakachipa mutengo' zvinhu zvekuona muCórdoba
Zvikonzero zvishanu zvinomanikidza kuziva Teruel
Sei tichida torrijas zvakanyanya paIsita?